Nagarik News - जय हो भ्यालेन्टाइन बाबा!
शुक्रबार २ फागुन, २०७०
हावा, पानी र अन्नजस्तै अनिवार्य छ प्रेम। यो मानव जीवनको सबैभन्दा सुखद आयाम हो। प्रेमको अमरत्व र शाश्वताबारे असंख्य ग्रन्थ लेखिएका छन्, असंख्य गीत गाइएका छन्। केही वर्षदेखि नेपाली समाजले प्रेम प्रदर्शन र अभिव्यक्तिका लागि नयाँ पर्व आत्मसात् गरेको छ– भ्यालेन्टाइन्स डे। अझ भ्यालेन्टाइन्स डे तन्किएर भ्यालेन्टाइन्स विकसम्म पुगेको छ। शहरबजारका तन्नेरीहरू भनिरहेका छन्, 'जय हो, भ्यालेन्टाइन बाबा!' जवान मुटुहरू मग्न भएर धड्किँदै गर्दा बजारले पनि फुल्ने–फल्ने मौका पाएको छ। पिरती दिवसका अवसरमा सजना बराल र अम्मर जिसीले युवा मनहरूको तरंग नाप्न खोजेका छन्।
'भ्यालेन्टाइन्स डेलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्नुपर्छ,' त्रिचन्द्र कलेजका पूजन शर्मा भन्दै थिए, 'माया–प्रेम भनेको ख्यालठट्टा गर्ने कुरा होइन। यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ।' उनले पाँच वर्षयता प्रत्येक साल भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने गरेको बताए। 'मेरो भ्यालेन्टाइन्स डे सधँै गज्जबको हुन्छ,' स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनले भने, 'प्रत्येक साल नयाँ–नयाँ गर्लफ्रेन्डसँग मनाउँछु। म त भन्छु– जय हो, भ्यालेन्टाइन बाबा!'
यसपालि गुड फ्राइडेकै दिन भ्यालेन्टाइन्स डे परेकोमा ज्ञानोदय इन्टरनेसनल स्कुलकी जेशिका महर्जन प्रफुल्ल छिन्। 'डबल रमाइलो हुने भयो यसपालि,' आइतवार न्यू रोडको आर्चिज ग्यालरीमा भेटिएकी उनले भनिन्, 'फ्राइडे यसै पनि रमाइलो गरिन्थ्यो। त्यसमाथि भ्यालेन्टाइन्स डे पर्यो , झन् रमाइलो हुने भयो। बबाल पार्टी गरिन्छ।' उनले साथीभाइसँग मिलेर घरमै प्रेम उत्सव मनाउने बताइन्।
अधिकांश शहरिया युवा अहिले 'भ्यालेन्टाइन्स–मुड'मा छन्। फेब्रुअरी ७ मा पर्ने रोज डे (गुलाब दिवस) देखि नै उनीहरूलाई भ्यालेन्टाइन्सको चटारोले छोएको हो। 'धेरैले रोज किने त्यो दिन,' डिजाइनर्स फ्रेस फ्लावर, कमलादीका राज खड्काले भने, 'स्कुल पढ्दै गरेका केटाकेटीले समेत हजार–पन्ध्र सय रुपैयाँ पर्ने रोजका बुके लगे।' गुलाबको एउटा हाँगोमात्रै किन्नेहरू अझ बढी भएको उनले बताए।
'गुलाबको फूलले माया प्रगाढ बनाउँछ,' मोर्गन कलेजका विशाल राईले गुलाबको महŒव सुनाए, 'यो मायाको सिम्बोल हो। एउटा रोज दिँदैमा गर्लफ्रेन्ड खुशी हुन्छिन् भने किन नदिने? दिनुपर्छ।' उनले आफ्नी गर्लफ्रेन्ड प्रिया थापालाई रोज डेकै दिन फूल र ग्रिटिङ कार्ड दिएको बताए। आफूहरूको सम्बन्ध चार महिनादेखि चलिरहेको पनि विशालले सुनाए। 'केटीहरूलाई गिफ्ट मन पर्छ,' उनले बुझेका छन्, 'म बेलाबेला दिइरहन्छु। प्रिया त मक्खै पर्छिन्।'
प्रेम दिवस युवा पुस्ताका लागि माया साट्ने दिन मात्रै नभएर रमाइलो र ख्याल–ठट्टा गर्ने अवसरसमेत हुने गरेको छ। कतिपय युवायुवती कसले कति वटी वा कति वटालाई पट्याउन सक्ने भनेर बाजी थाप्ने गर्छन् यस दिन। लिटिल रोज हाइएर सेकेन्डरी स्कुल, बिर्तामोड, झापाका समिर खड्का भन्दै थिए, 'पोहोर साल तीन जनालाई रिङ्याएको थिएँ। यसपालि छ जनाको टार्गेट छ मेरो।'
एकै पटक धेरै जनासँग अफेयर चलाउने मामिलामा केटीहरू पनि कम छैनन्। समिरले आफ्नै समकक्षी कामना श्रेष्ठको उदाहरण दिए, 'कामना त डेड्ली (खतरनाक) छे। जसलाई पनि प्रपोज हान्दिन्छे। भ्यालेन्टाइन्स डेमा त्यसलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ।' समय तालिका नै तयार पार्नु पर्ने गरी व्यस्त हुन्छिन् रे उनी। कामनाले झैँ एकैचोटि धेरै जनासँग अफेयर चलाउनेलाई भ्यालेन्टाइन्स डेमा निकै सकस पर्ने गरेको देखिन्छ।
'सबैलाई टाइम दिनुपर्छ,' लाजिम्पाटकी २१ वर्षीया सञ्जु रानाभाटले पिरलो सुनाइन्, 'भ्याउँदिनँ भनौँ भने 'अर्कैसँग गई' भन्ने शंका गर्लान्! जाऊँ भने कसैले कता बोलाउँछन्, कसैले कता। कुद्दाकुद्दै हैरान भइन्छ।' मल्टिपल–रिलेसनसिपमा रमाउनेमा युवामात्रै छैनन्। कतिपय वयस्कहरू पनि साँझ श्रीमतीसँग इन्ज्वए गर्ने र दिउँसो गर्लफ्रेन्डसँग भी–डे मनाउने गर्दा रहेछन्। 'हाम्रो घरछेउको एउटा अंकल त्यस्तै छन्,' बानेश्वर क्याम्पस, बीए संकायका इन्द्र रोकाले पोल खोले, 'पोहोर त्यो अंकल र म एउटै क्याफेमा पुगेछौँ। अंकल एउटा केटीसँग 'ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे' लेखिएको केक काटिरहेका थिए।'
बानेश्वर क्याम्पसका २० वर्षीय शिवम् आचार्य यसपालि चाहिँ 'भ्यालेन्टाइन बाबा'को आशिर्वाद पाउने आशमा छन्। यत्तिका वर्षसम्म कसैसँग प्रेम गर्न नसकेकोमा उनी बढो चिन्तित देखिन्थे। 'भ्यालेन्टाइन्स डेमा प्रपोज गर्न थालेको तीन वर्ष भइसक्यो,' उनले भने, 'कहिल्यै पोजिटिभ उत्तर आएन। यसपालि त भ्यालेन्टाइन बाबाले कृपा गरेर एउटी मिलाइदिए हुन्थ्यो नि।'
साथी र साथीका ब्वाइफ्रेन्डसँग क्याफे जाँदा आफू 'कबाबमे हड्डी' बन्नु परेको अनुभव छ नवोदित कलेज, कक्षा १२ की निर्जला दाहालसँग। पोहोर साल महाबौद्धस्थित एन्डिज क्याफेमा मनाएको भ्यालेन्टाइन दिवस उनी कहिल्यै बिर्सिन्नन्। भन्छिन्, 'साथीहरूले रमाइलो हुन्छ, जाऊँ भने, गएँ। त्यहाँ पुगेपछि केटीहरूले आ–आफ्ना ब्वाइफ्रेन्ड बोलाए। मेरो थिएन। बस्नु कि हिँड्नु भयो।'
अरू बेला वास्तै नभए पनि भी–डेमा ब्वाइफ्रेन्डको आवश्यकता खड्किने निर्जलाको अनुभव छ। 'प्रत्येक साल आफू सिंगल हुँदा झ्याउ हुने रै'छ,' उनले मुख खोलिन्, 'यसपालि अलि अनुहार परेको केटाले प्रपोज गर्योू भने 'यस' भन्दिन्छु।' थापाथली क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका अंशु गुरुङ पनि यसपालि केटी 'पट्याउने' ध्याउन्नमा छन्। उनले फेब्रुअरी ८ मै एउटीलाई 'आई लभ यू' भन्दिएका थिए।
'भ्यालेन्टाइन्स डेसम्म कुर्न सकिएन,' अंशु भन्छन्, 'प्रपोज डे (८ फेब्रुअरी)मै झ्याप्प प्रपोज हान्देको थिएँ। उत्तर चाहिँ 'नो' आयो।' प्रेममा कालो झन्डा पाए पनि अंशु निराश छैनन्। शुक्रवार क्याम्पसकै कुनै केटीलाई फूल दिने सुरमा छन् उनी। 'कोही न कोही त पट्टिएली नि,' उनले भने, 'तीन–चार वटीलाई लाइन हानिरा'छु। तीमध्ये एउटी न एउटीले त कसो भाउ नदेली मलाई? मेरो भ्यालेन्टाइन्स डे योजना भनेकै केटी पट्याउने हो।'
प्रणय दिवसका योजना
चाडपर्व मनाउन माहिर नेपालीलाई भ्यालेन्टाइन्स डे पनि सुवर्ण अवसर हो। यस दिनका लागि धेरैले धेरै थरी योजना बनाइसकेका छन्। मायालु हुने/नहुनेदेखि हालसालै ब्रेकअप भएकाहरूले समेत भ्यालेन्टाइन्स डेमा कहाँ जाने र के गर्ने, तय गरिरसकेका छन्। शान्तिनगरस्थित न्यू मोर्डन इंग्लिस स्कुलको कक्षा ९ मा पढ्ने जेशन राउतलाई ट्र्याजिडी परेको छ। यद्यपि, उनी प्रणय दिवस मनाउने मुडमा छन्। 'दुःख पर्योट भन्दैमा निराश भएर बस्नु हुँदैन,' उनले उपदेश दिए, 'गर्लफ्रेन्ड भनेका माइक्रो बसजस्तै हुन्। एउटा गए अर्को आइहाल्छ, के टेन्सन लिनु?'
भूपू गर्लफ्रेन्डले सोमवार चकलेट डेकै दिन ब्रेकअप दिएकोमा भने जेशनको चित्त दुखेको छ। 'तीन सय ४० रुपैँयाको चेरियर चकलेट किन्देको थिएँ,' उनी भावुक बने, 'सबै आफैँले खानुपर्यो'।' बिछोडको पीडा भुलाउन उनले शुक्रवार दरबारमार्गस्थित आई
क्लबमा ज्यान फालेर नाच्ने विचार गरेका छन्। 'केटाहरूले टिकट देखाउँदै थिए,' उनले भने, 'मजाले नाच्नुपर्ला। रिफ्रेस भइन्छ कि?'
लिंकन कलेज, बीए तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत चार युवतीले भने शुक्रवार दिउँसो ड्राई पिकनिक जाने र साँझ 'गुन्डे' फिल्म हेरेर भी–डे मनाउने सोच बनाएको बताए। 'हाम्रो ग्याङमा कसैको पनि बीएफ छैन,' २१ वर्षीया कल्पना गुरुङले भनिन्, 'हामी आफू–आफू रमाइलो गर्ने हो।' पिकनिक खान उनीहरू ककनी जाँदै छन्।
जोडी हुने अधिकांश युवायुवतीको योजना भने प्रायः एउटै हुने गरेको पाइयो– क्याफेमा भेट्ने। 'काठमाडौँमा अलि राम्रो खालको पार्क, गार्डेनहरू नै छैनन्,' ह्वाइट हाउस कलेज, कक्षा १२ का नवीन मगरले भने, 'त्यही एउटा गार्डेन अफ ड्रिम्स छ। त्यहाँ कति जानु? भ्यालेन्टाइन्स डेमा त खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन त्यहाँ।' यसैले डेटिङका लागि क्याफे नै उचित गन्तव्य भएको उनको निष्कर्ष छ। नवीनले शुक्रवारको आफ्नो योजना भने सुनाएनन्। 'टप सिक्रेट हो,' उनले भने, 'अहिले केही नभनौँ होला।'
भ्यालेन्टाइन्स डेलाई हाउडे चाड मान्नेहरू पनि छन्। एक दिन माया व्यक्त गर्दैमा साँच्चैको माया बस्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् उनीहरू। कोही भने यो विदेशी चाड भएकाले खासै वास्ता नहुने बताउँछन्। बर्नहार्ट कलेज, कक्षा ११ की विद्या भण्डारीले अहिलेसम्म भ्यालेन्टाइन्स डे मनाएकी छैनन्। 'मनाउने रहर पनि छैन,' उनले भनिन्, 'फूल दिएर, टेडी बियर, ग्रिटिङ कार्ड दिएर पनि माया बस्छ कहीँ? यो चाडको रीतिरिवाज नै ठीक लाग्दैन मलाई।'
फेब्रुअरी १४ लाई प्रेम दिवस भनेर मनाउनु ठीकै भए पनि यसअघि आउने अनेकथरी 'डे' (दिवस) बारे सुन्दा चाहिँ निकै हाँस उठ्छ, अकला ब्युटिपार्लर, नयाँ बजारकी ब्युटिसियन प्रभा गुरुलाई। 'रोज डे रे, किस डे, हग डे, के–के हो के–के डे पनि!' उनी खित्का छोड्छिन्, 'यस्ता डे पनि हुँदा रै'छन्। यही पालि सुनेँ मैले त। साह्रै हाँस उठ्यो।' ती 'डे'हरू मनाउन साध्य नै नहुने उनले बताइन्।
सामाखुशी चोकमा रहेको नितिश क्याफेका नितिश प्रजापतिलाई भने भ्यालेन्टाइन्स डे बच्चाबच्चीको पर्वझैँ लाग्छ। 'क्याफे चलाउनेले यस्तो भन्न नहुने हो,' उनले कुरा चपाए, 'तर, आफूले अहिलेसम्म यस्ता प्रणय दिवस–सर्णय दिवस मनाएको छैन। यो त अहिलेका भुराहरूले मनाउने चाड हो।'
आफू काठमाडौँ, गर्लफ्रेन्ड दाङमा भएकाले सविन राणाको भी–डे खल्लो हुने भएको छ। सोमवार दरबारमार्गको शेर्पा मलमा भेटिएका उनी चिन्तित देखिन्थे। 'उनी आइतवारमात्रै यहाँ आउँछिन्,' उनले भने, 'यसपालि फेसबुकमै भ्यालेन्टाइन्स डे सेलब्रेट गर्नुपर्ला। दिनभरि च्याट गर्ने प्लान छ ।'
डीएभी स्कुल, जाउलाखेलकी अभिन्यु बस्नेतको हालत पनि सविनकै जस्तो छ। ब्वाइफ्रेन्ड भारतको सिलोङमा भएकाले भाइबरबाट कुराकानी गर्ने सोच छ अभिन्युको। 'ई–कार्ड पठाइसकेँ,' उनले भनिन्, 'ऊ यहाँ भएको भए टी–सर्ट गिफ्ट दिन्थेँ।' संकटा गिफ्ट जोनका साजन वज्राचार्यले चाहिँ त्यो दिन राम्रो व्यापार हुने भएकाले भ्यालेन्टाइन्स डेको भोलिपल्टमात्रै गर्लफ्रेन्डलाई 'टाइम' दिने बताए। 'व्यापारी परियो,' उनले भने, 'घाटा खाई–खाई डेटिङ जानु भएन। शनिवार कतै घुम्न लग्नुपर्ला उनलाई।'
भ्यालेन्टाइन्स डेअघि पर्ने रोज, चकलेट, प्रपोज, टेडी, प्रमिस, हग र किस डेका दिन दिनुपर्ने उपहार र भ्यालेन्टाइन्सका दिन हुने खर्चको विवरण सुन्दा त प्रेम नगरेकै बेस ठान्छन्, बानेश्वर क्याम्पसका प्रभाकर राई। 'लगभग पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,' उनले भने, 'त्यत्रो पैसा खेर फाली–फाली को भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउँछ? पैसाको नाश!' त्यत्रो खर्च गरेर स्वाङ देखाउनुको सट्टा मन परेको मान्छेलाई दसैँ–तिहारमै प्रपोज हान्दा फाइदा हुने प्रभाकरले बताए।
स्कुल–कलेज पढ्दै गरेका र बेरोजगार युवायुवतीलाई त झन् उपहार किन्न र आउजाउ खर्च जुटाउनै धौधौ हुने गर्छ। हप्तौँअघिदेखि रकम संकलनमा लाग्नुको विकल्प हुन्न रे उनीहरूसँग। ''गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट किन्न पैसा दिनुस्' भनेर माग्नु भएन,' न्यू मोडर्न इन्टरनेसनल कलेजका केशव बुर्लाकोटीले भने, 'दुई–तीन हप्ताअघि नै मम–ड्याडसँग पैसा फुस्काइसक्नुपर्छ।' त्यसो त उनी प्रणय दिवस मायालुसँग मनाउन रुचाउँदैनन्। उनको स्टाइल अलि फरक छ। भन्छन्, 'त्यो दिन भेटघाट गरेर गर्लफ्रेन्डको विज्ञापन गर्न मन लाग्दैन। बरु, साथीभाइसँग गेट टुगेदर गरिन्छ।'
दाइजोका लोभीहरू 'जोइल' जान्छन्!
भाषा मानवको सम्पत्ति र परिचय भएकाले यसमा मानवीय परम्परा अन्तर्निहित हुन्छ। भारततिर विवाहिता महिलाहरू पनि 'ससुराल' जान्छन्। किनभने भारतमा पुरुषहरूले महिलालाई सम्पत्तिमा अधिकार दिएका रहेनछन्। यो कुरा 'ससुराल' शब्दबाट सहजतापूर्वक...
शुक्रवारका आर्किटेक्ट एवम् संस्थापक प्रधान सम्पादक किशोर नेपालले अघिल्लो वर्ष राजीनामा दिएपछि हामी शुक्रवारकर्मीले एक खालको एक्लोपन महसुस गरेका थियौँ। हामीले केही 'मिस' गरिरहेको अनुभव गरेका थियौँ। अहिले पनि हामी...
अभिनेत्री महिमा सिलवाललाई चिन्नेले 'हट हिरोइन'कै रूपमा चिन्छन् किनभने उनलाई पर्दामा देख्नेले हट आइटम डान्सर र बोल्ड शहरिया युवतीका रूपमा देखेका छन्। त्यसैगरी गुगलमा उनको तस्बिर खोज्यो भने सर्ट्सका टाँक...
हक्की स्वभावकी अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा कसैसँग दब्दिनन्। चित्त नबुझेको कुरामा पड्किहाल्छिन्। उनलाई कतिले 'जिद्दी' र 'केटाको जस्तो स्वभाव भएकी' समेत भन्छन्। थिएटर र फिल्ममा जमिरहेकी सिर्जनासँग धनबहादुर खड्का र सजना...
शुक्रवार सुन्दरी (फोटो फिचर)
यस पटक शुक्रवारले पोखरेली मोडल समित्रा धिमालको तस्बिर ब्लोअपमा छापेको छ। अरोमा रिसोर्टमा भुपाल गुरुङले खिचेका तस्बिरमा शमशेरले श्रृङ्गार गरेका छन्।